ASC Statements - The ASEAN SOGIE Caucus
Joint Statement on Afghanistan: Protect Women,...
18 Aug 2021Posted by
We, the undersigned organisations working to advance the human rights of persons of diverse sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics (SOGIESC) call for the protection of women, children, LGBTIQ people and other vulnerable persons in Afghanistan. Since 15 August, the Taliban-led takeover of Kabul’s Presidential Palace and the abrupt collapse of the Islamic Republic of Afghanistan’s government raises concerns...
Strategic steps towards an Inclusive ASEAN Region
04 Aug 2021Posted by
A Regional Statement of LGBTIQ+ Advocates from Southeast Asia We, the undersigned individual activists and organizations in Southeast Asia, are pushing for strategic steps towards an inclusive ASEAN region. The advancement of the human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer, and other sexual and gender diverse (LGBTIQ+) persons in the Southeast Asia remains an challenging endeavour. ASEAN, having the mandate to...
LGBTIQ+ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ရက်များနှင့်...
06 Feb 2021Posted by
မြန်မာတပ်မတော်သည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ပြည်သူတို့၏ ရွေးချယ်မှုများကို လေးစားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိင်စိတ်ကိုင်းညွတ်မှု၊ လိင်ဝိသေသခံယူမှုနှင့် ထုတ်ဖော်ပြသမှု၊ လိင်လက္ခဏာ အမှတ်အသား (SOGIESC) တို့ မတူညီကွဲပြားသောသူတို့၏ တစ်ဦးချင်း လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ရက်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်တွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်...